‌ကိုရိုနာကြောင့် အိန္ဒိယမှာကျင်းပမယ့် Mi 10 5G မိတ်ဆက်ပွဲကို Xiaomi ရွေ့ဆိုင်း | Anycall Mobile
RKhar Min Thant,4months ago 1 min read 102
Covid-19 လို့အမည်ပေးထားတဲ့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဟာ ကျွန်တော်လူသားတွေကို တစတစနဲ့တိုးမြှင့်ပြီးခြောက်လှန့်လာပါပြီ။ ပရိတ်သတ်တို့ သိခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ လွန်ခဲ့တဲ့ ဖေဖော်ဝါရီလပိုင်းက MWC(Mobile World Congress) ကို Cancel ပြီးနောက်ပိုင်း မိတ်ဆက်ပွဲတွေ အကုန်လုံးဟာ အခုနောက်ဆုံး Redmi K30 Pro အထိ Online မှာပဲ ကျင်းပလာကြပါတော့တယ်။ အခုလည််း Corona ကြောင့် Xiaomi ရဲ့ India မှာ Mi 10 ကိုမိတ်ဆက်မယ့် အစီအစဉ်ကို လက်လျှော့ထားလိုက်ရပြန်ပါပြီ။
Xiaomi ရဲ့ India ဘက်ကအကြီးအကဲဖြစ်တဲ့ Manu Kumar Jain ဟာ သူ့ရဲ့ Twitter ပေါ်မှာ အခုလိုကြေညာခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေ အသေအချာဆွေးနွေးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ India နိုင်ငံရဲ့ Covid 19 ပြန့်ပွားမှုထိန်းချုပ်ရေးကို ငဲ့ကွက်သောအားဖြင့်လည်းကောင်း Mi Fan တွေရဲ့ ကျန်းမာရေး ထိခိုက်မှာစိုးရိမ်တဲ့အတွက်ကြောင့် လည်းကောင်း သူတို့ရဲ့ Mi 10 မိတ်ဆက်ပွဲကို ရွေ့ဆိုင်းလိုက်ပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်း အခုလိုတင်ထားခဲ့ပါတယ်။
အခု Corona Crisis သာအရမ်းကြီးဆိုးရွားမလာဘူးဆိုရင် Mi 10 5G ကို လာမယ့် March လ 31 ရက်နေ့မှာ မိတ်ဆက်ဖို့စီစဉ်ထားခဲ့တာပါ။ အခုသူတို့ရဲ့ ကြေညာချက်ထဲမှာတော့ နောက်ထပ်ပြန်ပြီး ကျင်းပမယ့် ရက်စွဲကို ဖော်ပြထားခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အခြေအနေကြည့်ပြီး မကြာခင်မှာ နောက်ထပ်ကျင်းပမယ့်ရက်စွဲကို ထပ်ပြီးထုတ်ပြန်သွားမယ်လို့ပြောထားပါတယ်။
Mi 10 (Photo-Internet)
ဒါပေမယ့်လည်း လာမယ့် 27 ရက်နေ့မှာမိတ်ဆက်မယ့် Mi 10 ရဲ့ Global Launching Event ကတော့ ကိုရိုနာကို မှုပုံမပေါ်ပါဘူး။ ဒီနေ့အချိန်အထိ ဘာစာ၊ ဘာကြေညာချက်၊ ဘာပြောကြားချက်တစ်စုံတစ်ရာမှ ထွက်မလာတဲ့ပုံကိုထောက်ရင်တော့ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ Mi 10 Global ကို မကြာခင်မှာမြင်တွေ့လာရဖွယ်ရှိနေပါတယ်။
ဒါ့အပြင် Mi 10 Series ထဲမှာ Mi 10 5G က အိန္ဒိယကိုဝင်မယ့် တစ်ခုတည်းသော ဖုန်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ သူ့ထက် ဈေးပိုကြီးပြီး Specifications ပိုကောင်းတဲ့ Pro Version ကို India မှာရောင်းချမှာမဟုတ်ပါဘူး။ နောက်ပြီး လွန်ခဲ့တဲ့တစ်ပတ်က Manu Kumar ရဲ့Twitter ပေါ်ကပြောကြားချက်အရ Mi 10 5G ဟာ တရုတ်မှာကြေညာတဲ့ဈေးထက် အိန္ဒိယမှာ ဈေးပိုကြီးပါလိမ့်မယ်။ အကြောင်းကတော့ Direct Import ဖြစ်တာကြောင့်ရော အိန္ဒိယရဲ့ ဖုန်းတွေအပေါ်တိုးမြှင့်သတ်မှတ်လိုက်တဲ့ အခွန်ပေါ်လစီကြောင့်ရော ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ နောက်ထပ်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့တစ်ချက်ကတော့ USD to INR ငွေလဲနှုန်းတွေ ဆက်တိုက်ကျနေတာကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ်။ ဒီအကြောင်းကိုတော့ Manu က သူ့ရဲ့ Twitter ပေါ်မှာ အခုလိုတင်ထားခဲ့ပါတယ်။
US$ = INR 76.22 😭😭😭 pic.twitter.com/HMdHbLWqIv
အချုပ်အနေနဲ့ သုံးသပ်ရရင် Xiaomi ရဲ့ ဂဏာန်းစီးရီးတွေက ဟိုအရင်အချိန်ကတည်းက Upper Midrange တန်းထဲမှာရှိနေပြီးတော့ Flagship killer ဘွဲ့တွေကို ထိုက်ထိုက်တန်တန် သိမ်းပိုက်ထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုအချိန်မှာတော့ Mi 10 (PI) ရဲ့ဈေးနှုန်းက 10 သိန်းဝန်းကျင်အထိရောက်ရှိနေပါပြီ။ ဒါပေမယ့်လည်း Price to Performance ဖြစ်တဲ့နေရာမှာတော့ အားလုံးသိတဲ့အတိုင်း ထိပ်ဆုံးဆိုတဲ့နေရာကို ဆက်လက် ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ဆဲဖြစ်ပါတယ်။ သင်ရော Xiaomi ဖုန်းတွေ 10 သိန်းနား ကပ်လာတဲ့အပေါ်မှာဘယ်လိုမြင်လဲ ? အရင်ကလို တန်တယ်ဆိုပြီး မျက်စိမှိတ်ဝယ်ဖြစ်ဦးမှာလား ? ဆိုတာကို အောက်ကကွန်မန့်မှာ ဝင်ရောက် ဆွေးနွေး အာလူးဖုတ်သွားကြပါဦး။
Tags	#India	#Mi 10	#Mi 10 Pro	#Xiaomi